LECTURE INTERESSANTE - rov@higa
17 Novembre 2010, 14:21pm
Vondron’ny Parlemantera TIM
Handray fepetra henjana raha tsy mivoaka haingana ry Fetison A.
Hatramin’ny nanagadran’ny fitondrana FAT an-dry Ing. Fetison Andrianirina sy Zafilahy Stanislas ary Pasitera Edouard Tsarahame dia tsy mijanona mihitsy ny fitakiana ny hamoahana azy ireo tsy misy hataka andro sy tsy misy fepetra. Mitaky ny famoahana azy telo lahy tsy misy hataka andro miaraka amin’ireo gadra politika mahery ny 100 ny Vondron’ny Parlemantera TIM; tamin’ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety tamin’ny sabotsy tetsy Bel’Air. Milaza ny handray fepetra ireto Parlemantera TIM ireto raha tsy mivaly ao anatin’ny fotoana fohy izany. “Efa nanao ny dingana rehetra amin’ny famoahana azy ireo izahay. Hisy ny fepetra horaisina raha tsy misy vokany izany. Efa mihoatra ny loha ny sangy ataon’ny fitondrana FAT ka tsy maintsy misy ny hetsika sy fepetra horaisina saingy fepetra manaraka ny ara-dalana” hoy ny Depiote Hery Raharisaina. Nomarihin’ity Depiote TIM mafana fo ity fa “tsy maintsy tafavoakanay ao anatin’ny fotoana fohy izy ireo”. Nomarihin’ireto Vondron’ny Parlemantera TIM ireto fa “fanjakana mpampihorohoro no misy eto ary hianjadian’izany amin’izao izay rehetra te haneho hevitra”.
Hetsik’i Monja Efa niatrana ny RFI hiaro azy ?
Nandritra ilay hetsika nokasain’i Monja Roindefo, Praiministry ny FAT teo aloha, hatao teny Ankorondrano, ny sabotsy 13 novambra teo dia fantatra fa efa niatrana teny ihany koa ny miaramila iray kamiao hiaro azy. Tsy tanteraka anefa ilay fiantsoana ny mponin’Antananarivo noho ny fandrarana sy ny antsojay natao tamin’ny mpikarakara. Hatramin’ny mpanakanto mantsy dia fantatra fa nisy kolonely iray am-perinasa nandrahona azy ireo. Mikasika ireo miaramila avy amin’ny RFI Ivato indray dia ny komanda Roger Luc no nitarika azy ireo ary tetsy amin’ny Jumbo Ankorondrano izy ireo no niatrana niandry ilay fihetsiketsehana. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa nisy fifamaliana teo amin’ity farany tamin’ny finday sy ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ny foloalindahy noho izao nitondrany miaramila izao. Valin-teny tsotra moa no nambarany tamin’io tompon’andraikitra io fa «namany i Monja Roindefo ka tsy maintsy miaro azy izy». Ho hita eo ny tohin’izany rehetra izany.
Amiraly Ratsiraka Ho avy amin’ny zoma
“Hampahafantariny dimy andro mialoha ny hahatongavany ny fiverenan’ny filoha Ratsiraka indray an-tanindrazana”, hoy Ramisandrazana toarian’ny nahatongavan’i Tantely Andrianarivo.
Raha nanontaniana ity mpanao politika, mpikatroka Arema ity omaly dia nilaza fa alohan’ny sabotsy izao no hahagongavan’i Deba. Toa manaporofo izany ny fisian’ny dokambarotra mandeha amin’ny fahitalavitra eto an-drenivohitra, milaza fa “Tsy ho ela ...”. Ny Pr Ranjeva Raymond raha nitafa tamin’ny mpanao gazety dia nanamafy ny fanirian’ny amiraly hiverina an-tanindrazana, na tsy nanambara fotoana aza. In-droa nihaona tany Frantsa rahateo ny roa tonta, tato anatin’ny iray volana teo, nidinika ny amin’ny raharaham-pirenena. Ny loharanom-baovao hafa anefa no namaritra mazava fa ny zoma 19 novambra izao ny amiraly Ratsiraka no hitodi-doha an-tanindrazana. Araka ny fantatra aza tokony ho niditra mivantana niteny tamina fahitalavitra tsy miankina iray teto an-drenivohitra ny amiraly omaly nanambarany io fiverenany io.
Tsy mankato ny hanatanterahana io referandaoma io ny tenany, ary nanao antso avo tamin’i Andry Rajoelina sy i Camille Vital mihitsy mba hampiatoana izany, satria “hampisara-bazana ny Malagasy” araka ny filazany. Tsy misy mahalala izay havoaky ny ampitso moa, na dia efa somokotra mafy hanatanteraka izany fifidianana izany ny FAT. Raha niteny tamin’ny antso an-tariby tao amin’ny fahitalavitra TV Plus ny tenany ny takarivan’ny zoma 01 oktobra 2010, mialoha indrindra ny nisokafan’ny fampielezan-kevitra momba ny lalàmpanorenana dia nilaza ny filoha Ratsiraka fa manana vahaolana roa na telo azo antoka sady mahomby azo aroso hamaranana tsy misy raorao ny krizy izy, saingy miandry azy tafaverina any an-tanindrazana no hanazavany izany. Inona no hambarany eo am-pahatongavana ? Eo isika mahita izy, fa dia tonga izany ny lera … rehefa avy nanao sesitany ny tenany nandritra ny valo taona tany Frantsa tany i Deba.
S’il n’était pathétique, le feuilleton pourrait plaire. Résumons.
Saison 1 : en 2002, Marc Ravalomanana, jeune et fringuant maire de la capitale et homme d’affaire aisé (son industrie laitière lui vaut le surnom de « roi du yaourt ») vient à bout, avec le ... (Suivre le lien)